BAARITAAN: Afar Qodob oo Madaxweyne Farmaajo ku qasabtay Inuu la taliye ka dhigto Tarsan? | Garqaad News Agency
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa lataliyihiisa dhanka siyaasadda u magacaabay Maxamed Axmed Nuur Tarsan oo kamid ahaa musharaxiintii xilka madaxweynaha.
Tarsan oo sidoo kale soo noqday Duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kamid ah siyaasiyiintii isbadal doonka ee sida weyn utaageersanaa madaxweyne Farmaajo kadib doorashadiisii.
Hadaba, Shabakadda Wararka Garqaad.com ayaa ogaatay afar qodob oo keentay in Madaxweyne Farmaajo uu xil umagacaabo Tarsan.
1- Waa Aqoonyahan leh siyaasadda Farmaajo oo kale: Tarsan ayaa lagu xasuustaa inuu yahay nin howlkar ah oo aysan dhibin hadalada, waxaana uu awood uleeyahay inuu soo jiito qalbiga dadka sidaas darteed talooyinkiisa ayaa muhiim u ah madaxweyne Farmaajo.
2- Inuu helo Qibradda Ragii soo shaqeeyay: Magacaabidii uu sameeyay madaxweyne Farmaajo mudadii uu xilka hayay waxaa ka dhex muuqday dad badan oo siyaasadda ku cusub kuwaas oo aanan qibrad badan laheyn, sidaas darteed Madadxweyne Farmaajo ayaa ubaahnaa qof qibrad leh oo kala taliya dhanka siyaasadda.
3- Balan Qaad hore: Tarsan ayaa kamid ahaa Xubno uu madaxweyne Farmaajo balanqaadyo xileed u sameeyay hadii la doorto, inkastoo Tarsan uusan awood uyeelan inuu codad ka helo doorashadii lasoo dhaafay, hadana dad badan ayaa aamisan in hadaladii uu Warbaahinta kasii daayay ay niyad jabisay xisbigii Damu-jadiid iyo musharaxiintii kale.
4- Arrimo beeleed: Ugu dambeyn xog lagu kalsoon yahay ayaa sheegeysa in madaxweyne Farmaajo uu isku dayayo inuu qanciyo beesha uu kasoo jeedo siyaasigan oo aan saami wanaagsan ku laheyn dowladda.
Si kastaba, Tarsan ayaa ah siyaasi leh karti iyo aqoon, waxaana dadka taxliiliya siyaasadda ay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu dooqasho wanaagsan sameeyay markii uu la taliye ka dhiganayay.